Dar-dargalinta Awooda Quwada Korontada Deegaanka. - Cakaara News
Dar-dargalinta Awooda Quwada Korontada Deegaanka.
Jijiga(CN) sabti, 16ka January, 2016, Kulan balaadhan oo lagaga hadlayay xoojinta awooda quwada korontada deegaanka ayaa ka dhacay hoolka shirka xarunta madaxtooyada cusub.
Kulankaasi oo ay hogaaminayeen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, iyo madaxwayne ku xigeenka ahna madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi, ayaa waxa ka soo qayb-galay masuuliyiinta iyo shaqaalaha shirkada quwada korantada deegaanka, masuuliyiinta xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI iyo masuuliyiinta maamulka magaalada jigjiga
Kulankaasi ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in kulankan diirada lagu saarayo dar dargalinta adeegyada shirkada quwada korantada ee guud ahaanba deegaanka, nidaamka adeeg bixinta shirkada quwada korontada xalinta dhibaatooyinka ka jawaab celinta baahida bulshada ee dhinaca adeega laydha iyo gufaynta gol-daloolooyinka jira wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in xooga la saaridoono sidii loo dar-dargalin lahaa mashaariicaha socda iyo kuwa bilowga ah ee fidinta adeega laydhka.
Dhankooda masuuliyiinta shirkada quwada korontada ee DDSI ayaa soo bandhigay nidaamka adeeg bixineed ee shirkada, dhibaatooyinka u baahan in la xaliyo iyo jihooyinka looga gudbayo dhibaatoyinka ka jira adeega laydhka. Waxayna sharax dheerka bixiyeen istaraatajiyadaha iyo hiigsiga horumarineed ee shirkada iyo nidaamka fulineed ee lagu hirgalinayo.
Gabagabadii kulankaasi ayaa waxaa laysla qaatay jihooyinkii lagu gaadhsiin lahaa bulshada adeeg hufan oo ah dhinaca adeegyada laydhka